Daafaca Man United ee Luke Shaw oo muddo bil ah garoomada ka maqnaan doona & Lixda kulan ee uu seegi doono oo la ogaaday – Gool FM
Daafaca Man United ee Luke Shaw oo muddo bil ah garoomada ka maqnaan doona & Lixda kulan ee uu seegi doono oo la ogaaday
Haaruun November 11, 2020
(Manchester) 11 Nof 2020. Luke Shaw ayaa la soo warinayaa inuu ugu yaraan muddo bil ah garoomada kaga maqnaan doono dhaawac muruqa ah oo ka soo gaaray kulankii dhowaa oo kooxdiisa Manchester United 3-1 uga adkaaday Everton.
Daafaca garabka bidix ayaa lagu bedelay Axel Tuanzebe daqiiqaddii 67-aad kaddib markii uu dhaawacmay, waxaana kooxdiisu ay haatan xaqiijisay inuu wajahayo afar todobaad oo uu garoomada ka maqnaan doono si uu uga soo kabsado dhaawacaas, wuxuuna kooxda ka maqnaan doonaa lix kulan.
Xiddiga reer England ayaa seegi doona kulamada West Brom, Southampton iyo West Ham ee tartanka Premier League, sidoo kalena waxa uu ka maqnaan doonaa saddexda kulan ee xaasaasiga ah ee Istanbul Basaksehi, Paris Saint-Germain iyo RB Leipizig.
Dhinaca kale Man United ayaa heli doonta Alex Telles kaddib fasaxa ciyaaraha caalamiga ah, saxiixa xagaaga ayaana seegay shantii kulan ee ugu dambeeyey oo ay kooxdu ciyaartay.
Telles ayaa saftay kulankiisii ugu horreeyey ee kooxda Man United ciyaartii ay guusha ka gaareen Paris Saint-Germain ka hor inta uusan haleelin Korona Fayras.
Waa sidee xaaladda dhaawac ee Bruno oo xabbad xabadka looga dhuftay?... (Kaad mooddo maaha Bruno)
Ronald Koeman oo shaaca ka qaaday sababta ku qasabtay inuu ka tago xulka qaranka Holland